ထုတ်လုပ်သူ 14 လက်မ EW Api 5l အဆင့် X ကို -42 3layer ဖေအင်္ကျီကိုသံမဏိလိုင်းပိုက် - တရုတ် HEBEI TOP-metal ငါ / E ကို
ထုတ်လုပ်သူ 14 လက်မ EW Api 5l အဆင့် X ကို -42 3layer ဖေအင်္ကျီကိုသံမဏိလိုင်းပိုက်
စံ: API ကို
Standard2: API ကို 5L
အထူ: 11,13 - 59,54 မီလီမီတာ
ပြင်အချင်း (က Round): 355,6 - 1219 မီလီမီတာ
အလယ်တန်းဒါမှမဟုတ်မ: က Non-အလယ်တန်း
လက်မှတ်: API ကို
အထူးပိုက်: API ကိုပိုက်
အလွိုင်းဒါမှမဟုတ်မ: က Non-အလွိုင်း
ခေါင်းစဉ်: ပြင်ပ 3PE (2Pe, FBE) နှင့်ပြည်တွင်းရေး epoxy coated ပိုက်
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: 3PE Coating / တော၌ထားသော / အရောင်တင်ဆီစသည်တို့ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်
အသုံးပြုမှု: ရေနံ / ဓာတ်ငွေ့ / ရေစသည်တို့ကယ်ယူ
ချောမွေ့စွာ (SMLS) သံမဏိပိုက်ကိုလည်းအလယ်တန်း & မြင့်မားတဲ့ဖိအားကိုထမ်းများနှင့်နိုင်သည့်ပျမ်းမျှနံရံအထူနှင့်အတူ, ဂဟေဆော်ခြင်းမရှိဘဲ, နောက်ဆုံးပိုက်သတ်မှတ်ချက်ပြီးဆုံးရန်ပြွန်အလွတ်သို့မဟုတ်အစိုင်အခဲ ingot ၏လုပ်, ပြီးတော့ပူလှိမ့်သို့မဟုတ်အအေးကိုလှိမ့ / ရေးဆွဲသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် မကောင်းတဲ့အခွအေနေပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဓိကအားဖြင့်ဖိအားရေယာဉ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို, ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့, ရေငွေ့, ရေအဖြစ်ကောင်းစွာအချို့အစိုင်အခဲပစ္စည်းပို့ဆောင်အဖြစ်သယ်ဆောင်အရည်အတွက်အသုံးပြုအဆိုပါချောမွေ့စွာသံမဏိပိုက်
စံ API ကိုစသည်တို့ကို 5L, ASTM A53 / A106, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A335, ASTM A179, Din 17175 ST35.8 / 37, DIN1629 ST52,
သံမဏိအဆင့် GR.B, 20 #, စသည်တို့ X42 ~ X56, S235JR, S355JR, S355JOH, Q195, SS400, SS490,
အချင်းအပြင်ဘက်တွင်2"-28" (60.3mm ~ 711mm)
နံရံအထူ4~ 65mm
အားသာချက်များ 1.Bear အလယ်တန်း & မြင့်မားသောဖိအား 2. သာ. ကောင်း၏ချေးခုခံ 3. Averrage စိတ်ဖိစီးမှု 4. သင့်တော်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်
ယခင်: ပိုက် api 5l ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း x65 psl2ကာဗွန်သံမဏိချောမွေ့စွာ 3pe ကုတ်အင်္ကျီ
နောက်တစ်ခု: ID500mm Hdpe dredging pipe pe100
ချောမွေ့စွာပိုက် api 5l ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း x65 psl2ကာဗွန်သံမဏိ ...
api 5l 3PE x70 psl2 သံမဏိလိုင်းပိုက်, 3lpe coati ...
ASTM a106 စံ api 5l a53 အချိန်ဇယားကိုချောမွေ့စွာ ...
API ကို 5L ASTM A106 A53 ချောမွေ့စွာကာဗွန်သံမဏိပိုက်
API ကို 5L အဆင့်ခ ASTM A53 A106 အေး / ဟော့ Rol စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီး ...